Manchester City oo dalab weyn ka gudbisay xiddig ka tirsan kooxda Atlético Madrid – Gool FM
(Manchester) 20 Sebt 2020. Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Manchester City ay dalab weyn ka gudbisay xiddiga kooxda Atlético Madrid ee José Giménez, si ay uga dhigto daafaca ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta.
Sida laga soo xigtay wargeyskan caanka ah, maamulka kooxda Manchester City ayaa soo gudbiyay dalab dhan 89 million euros, oo lagu daray 5 million euros, taasoo ka dhigeysa dalabka 94 million euros.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in maamulka kooxda Atletico Madrid aysan dooneyn inay iska iibiyaan laacibkan, kaasoo ka mid ah tiirarka ugu waaweyn qorshaha tababaraha reer Argentina ee Diego Simeone.
Warbixinta ayaa waxay intaas ku dartay in agaasimaha ciyaaraha Manchester City ee Txiki Begiristain, uu kala xaajoonayo dhigiisa kooxda Atlético Madrid ee Andrea Berta iyo agaasimaha guud ee Miguel Ángel Gil Marín si heshiis loo dhameystiro.
Wargeyska ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in Atletico Madrid aysan marna fasaxi doonin daafaceedan José Giménez, kaasoo qandaraaskiisa uu dhacayo xagaaga 2023, waxaana heshiiskiisa lagu kansali karaa qiimo dhan120 million euros.